Barnaamujka kaftan siyaasadeed
Waa barnaamuj lagu falanqeeyo dhacdooyinka ka dhaca dalka Somalia isbuuc walba oo ay soo jeediyaan wariyeyaasha ah Cali Xaraare iyo Badri Ciise. RIIX HALKAN
Daawo lacagaha ay u uruuriyeen Soomaalida Kenya dadkii ku wax yeeloobay qarixii Muqdisho. RIIX HALKAN OO DAAWO MUUQAALKA Xafladan oo uu soo qababqaabiyay
Daawo halka uu marayo khilaafkii u dhaxeeyay dawlada federaalka Somalia iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo in mudo ah soo socday. RIIX HALKAN OO DAAWO MUUQAALKA Waxaa sidoo kale soo if baxaya ...
Xildhibaan Maxamad Cabdi Xayir Maareeye oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Somalia horayna u ahaa wasiirka war faafinta dawladii hore ee uu madaxwaynaha ka ahaa mudane Xassan Sheekh Maxamud ...
Waxaa magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeele laga filayaa in ay goor dhaw ka bilaabato xaflada caleema saarka madaxwaynaha maamulkaas mudane Maxamad Cabdi Waare. RIIX HALKAN OO DAAWO MUUQAALKA Mudane Waare oo ...